Trivia - Njem Ezinụlọ | Seymour, IN | Ogige Ndị ọbịa nke Jackson County
Na-akwọ ụgbọala Tour
Nke a onwe-eduzi ịnya ụgbọ ala tour bụ ụtụ maka "ndụ ugbo" na ndị mmadụ na-eme ka ha otu n'ime anyị asị kacha mkpa akụ. Ga ahụta ihe niile site na ọrụ ọrụ ugbo ọhụụ ugbu a na obere ụlọ ezinụlọ pere mpe nke oge gara aga. A ga-enwe ọtụtụ ụmụ anụmanụ ịlele na ugbo na ebe obibi ha. Offọdụ n'ime vistas na draịva mara mma dị n'akụkụ a nke Jackson County.
Enwere ike mezue njem ahụ n'ime elekere ole na ole ma ọ bụ ọ nwere ike were ọkara ụbọchị, dabere na mmasị gị na ogologo oge ịchọrọ ịga.
Pịa ebe a iji budata ozi njem ịkwọ ụgbọala
Stuckwish Ugbo ahia
4683 S. Steeti okporo ụzọ 135, Vallonia
Ugbo ezinaụlọ ahụ nwere akụkọ ihe mere eme ogologo oge na Jackson County ma dị 7 kilomita site na Brownstown na State Road 135. Gaa na ahịa anyị iji nwee ọ allụ ihe ubi niile anyị na-emepụta n'oge ubi. Anyị na-anya oke isi n'inye onyinye kachasị ọhụrụ na nke kachasị mma maka tebụl ezinụlọ gị. Site na ahịhịa ọhụrụ, nke toro na mpaghara ka mmanụ a honeyụ na jams, anyị ekpuchiwo gị. Anyị na-ebukwa ọrụ aka na ihe ndozi ụlọ sitere na obodo anyị. Kwụsị ma gaa leta anyị ma nwee obi ụtọ ihe Jackson County, Indiana bụ maka.
Pịa ebe a iji gaa na weebụsaịtị!
Ahịa Ugbo Ezinaụlọ Hackman
6077 S. State Road 135, Vallonia, 812-358-3377, Oge opupu ihe ubi.
Udiri nke otu ezinụlọ na-ere ahịa n'ugbo, na-enye ihe niile mmadụ ga-atụ anya ya site na ahịa ugbo n'akụkụ ụzọ. A na-enweta ọka, ugu, tomato, agwa na-acha akwụkwọ ndụ, cantaloupe na ọbụna mmanụ a producedụ a na-emepụta n'ime ahịa, nke na-arụ site n'ọgbọ nke ezinụlọ Hackman na ndị enyi ya. Odi n'etiti Vallonia na Salem, ahia ugbo bu ihe dika 10 kilomita site na Brownstown ma o ruru uzo.
Ahịa Ugbo Tiemeyer
Amaara nke ọma na perennials na kwa afọ na oge ọkọchị niile, nnukwu gourds dị iche iche, ugu na skwọsh na ahịa ime ụlọ nke na-egosipụta mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri, swiiti, jellies na ọtụtụ ihe siri ike ịchọta ihe. Restaurantlọ oriri na ọ serviceụ fullụ zuru oke na-enye ndị ọbịa nri ma na-enye nri ụtụtụ, nri ehihie, nri abalị na ọbụna Pizza! Ahịa ahụ na-enye mmadụ niile ihe, sitere na piich na skwọsh ndaeyo ruo zucchini, tomato, melon na ugu na gourds. O nwere ebe a na-ekpu ulo na ebe a na-egwu golf. Osisi Krismas egbuturu ọhụrụ na ahihia ohuru enyere maka ezumike.
Seymour Ebe Ahịa Ugbo
Ukpa Street adọba ụgbọala Lot, Seymour, Mee site na October
A na-anabata ngwaahịa na ngwongwo ụdị ọ bụla n'ahịa oge ndị ọrụ ugbo na obodo Seymour. A na-eme "MarketLite" site na elekere abụọ nke mgbede ruo elekere isii nke mgbede Mọnde na 2 ụtụtụ ruo etiti ehihie Wenezdee site na mmiri site na ọdịda wee malite na elekere asatọ nke ụtụtụ ruo elekere Satọdee nke ọnwa Ọktọba. A ga-enwe ahịa zuru ezu site na elekere asatọ nke ụtụtụ ruo etiti ehihie, Mee ruo Septemba. Satọdee nke atọ nke ọnwa ọ bụla, site na June rue Septemba, ga-abụ ụbọchị ahịa pụrụ iche Satọdee na ngosipụta nri, mmemme ụmụaka, egwu na ihe ndị ọzọ.
Brownstown Ewing Main St. Ahịa Ugbo
Ogige ihe nketa, nke dị nso na ụlọ ikpe obodo, June site na Ọktọba
A na-anabata ngwaahịa na ngwongwo na ogige ụlọ ikpe na Brownstown. A na-ere ahịa ahụ na Fraịde ọ bụla site na elekere itoolu nke ụtụtụ ruo elekere mbụ nke abalị malite na June ruo Ọktọba.
Ahịa Crothersville Farmer
A na-anabata ngwaahịa na ngwongwo. A na-ere ahịa ahụ na Satọde ọbụla site n’elekere itoolu nke ụtụtụ ruo n’ehihie. Oku 9-812-390.
Mmebe nke Wonning
5875 E. Co Rd 875N., Seymour, n'akụkụ ụzọ mepụta guzoro.
Ahịa Ugbo VanAntwerp
11181 N. US 31, Seymour, 812-521-9125, ụzọ ndị na-emepụta okporo ụzọ na-eguzo.
Ahịa a na-egosi okporo ụzọ dị n'akụkụ West Tipton Street.
Ugbo nri Lot Hill
Ezinụlọ nwere mmiri ara ehi, na-eme chiiz dị iche iche gụnyere cheese na-agbasa agbasa yana mmiri ara ehi ọcha na chocolate. Gelato dịkwa na flavors dị iche iche… ihe niile emere mmiri ara ehi site na ngwaahịa nke mmiri ara ehi. A na-ere ihe na Ahịa Ndị Ọrụ Ugbo dị na mpaghara na site na ụlọ ahịa ugbo na ihe onwunwe ha.
Plumer na Bowers Ugbo
Ugbo a na-azụ otu ezinụlọ na-agbanwe agbanwe site na arụmọrụ otu ahịhịa na 1886 ka ọ bụrụ ihe eji arụ ọrụ, igwe na-emepụta nri. Ngwongwo ndi oru ugbo di na ya bu ahihia, anu achara, ahihia achicha, ntụ ọka wit niile na popcorn.
Aquapon bụ griin haus mpaghara. Ugbo a na-enye akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na tilapia maka ụlọ ahịa, azụmaahịa na ndị ahịa mpaghara.
Rolling Hills Lavender Ugbo
Ugbo a na -anya isi n'ịba ezigbo mma na munstead lavender n'ugbo ezinụlọ na Cortland, IN. Nrọ nke lavender Trivia malitere na 2018 ma ugbu a ala ha bụ ebe obibi karịa osisi lavender 2,000. N’afọ 2020, ngwugwu ga -adị maka ịzụta.
Wineries / ebe omume biya
The Chateau de Pique Winery na ebe omume biya
Chateau de Pique nwere ọnụ ụlọ na-atọ ụtọ na ebe a na-anabata ndị ọbịa n’ebe mara mma. Ime ụlọ na-atọ ụtọ na-enye n'efu mmanya ụbọchị asaa n'izu. Acres atọ nke mkpụrụ vaịn ọcha na nke na-acha uhie uhie dotara ihe onwunwe na ndepụta mmanya na-etu ọnụ maka ụdị 25, sitere na Riesling to Semi-Sweets to Sweet Ports. Echefukwala ịnwale biya Chateau de Pique oge ọzọ ị gara ileta! Chateau de Pique nwekwara ụlọ ahịa satịlaịtị na mpaghara ahụ.
Chateau de Pique dị na 6361 North County Road 760 East, Seymour, 812-522-9296.
Osisi nnu Salt Creek
Winty Salt Creek malitere na 2010 dị ka ihe ntụrụndụ maka ezinụlọ Lee. Ebe winery dị na ugwu na-agagharị agagharị nke Southern Indiana na ókèala Hoosier National Forest. Tinyere mmanya mkpụrụ vaịn, mkpụrụ osisi Lee na-amịpụta site na blueberries, strawberries, cherị, pears, plums na ọbụna ọhịa bekee. The Salt Creek Winery na-emepụta merlot, cabernet sauvignon, chambourcin, Riesling, sunset red, blackberry, kpochapụwo ọcha, ọhịa blackberry, piom, blueberry, mango, peach, moscato, sweet red, sweet white, Catawba na red raspberry.
Salt Creek Winery dị na 7603 West County Road 925 North na Freetown. 812-497-0254.
Seylọ ọrụ Seymour Brewing
Molọ ọrụ Seymour Brewing bụ Seymour nke na-arụ ọrụ izizi. Kwụsị ma nwaa pint ma ọ bụ jupụta onye na-eto gị. Egwu dị egwu a na-eme site n'oge ruo n'oge na brewpub na, mgbe ihu igwe dị mma, nwee ọesụ na n'akụkụ Harmony Park. Usoro ihe osise zuru ezu na-apụta n'oge ọkọchị. A na-etinye ọtụtụ beers. Emi odude ke Brooklyn Pizza Company.
Molọ ọrụ Seymour Brewing dị na 753 West Second Street, Seymour. 812-524-8888.
Ebe Azụ Azụ Na Stefwood
Wuru n'okpuru Administrationlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrụ (WPA) na ngwụsị afọ ndị 1930, ụlọ ọrụ mmiri a nwere ọdọ mmiri na-azụlite ọdọ mmiri 9 na ọdọ mmiri na-ejide azụ na 1 brood-fish Ọdọ mmiri ndị a na-azụlite sitere na 0.6 ruo 2.0 acres buru ibu ma nye ngụkọta nke acres 11.6 maka ịzụ azụ. Facilitylọ ọrụ ahụ na-ebuli bass 250,000 nke anụ ọhịa abụọ, 20,000 bass nke anụ ọhịa anọ na anụ ọhịa 8,500 kwa afọ, nke a na-ejizi echekwa ọtụtụ mmiri ọha na Indiana.
(nke Indiana DNR nyere)
Ebe azu azu Stef Steeti di na 4931 South County Road 250 West, Vallonia, 812-358-4110.
Lonlọ akwụkwọ nke Vallonia, nkewa nke oke ohia
Ọrụ nọọsụ bụ itolite ma kesaa ihe ọkụkụ dị elu maka ihe ọkụkụ na-echekwa ndị nwe ala Indiana. A na-eto mkpụrụ osisi anọ na ọkara kwa afọ site na ụdị 60 dị iche iche. Facilitylọ ọrụ 250 acre na-emepụta ma conifers na hardwoods.
Vallonia Nursery, Ngalaba nke oke ohia di na 2782 West County Road 540 South na Vallonia. 812-358-3621
Akwụkwọ Schneider Nursery, Inc.
Site na nwata, George Schneider, nwere otu ochicho – itolite osisi iji mee ka gburugburu ebe obibi ya maa mma. George malitere itolite osisi na osisi na obere ala nke o binyere aka na ulo okuko nne na nna ya ma nweta ugbo.
Mgbe ụlọ akwụkwọ sekọndrị gasịrị, George lụrụ Mae Ellen Snyder. Ya na nwunye ọhụrụ ya zụtara acres 24 site na ugbo ezinụlọ ma guzobe ụlọ akwụkwọ na-ere ahịa na-ere ahịa – Schneider Nursery.
Ka ọ dị ugbu a, ụlọ akwụkwọ ọta akara nwere ihe karịrị 500 acres nke ala ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ ọta akara kachasị na Southern Indiana. Schneider na-ere ahịa ala na ubi ubi maka ndị ahịa na ndị na-ere ahịa.
Schneider Nursery, Inc. dị na 3066 East US 50, Seymour. 812.522.4068.